Ojiji nke superphosphate fatịlaịza: mejupụtara, ngwọta ngwọta - Fatịlaịza - 2019
Onye ọ bụla na-etolite na osisi maara na na-enweghị uwe, ọ gaghị enwe ihe ubi, ihe oriri ọ bụla, ma ọ bụ ihe ubi. Osisi anaghị enweta nri zuru oke n'ala, na mgbakwunye, ọ bụghị ala niile dị mma, ya mere na enyemaka nke fatịlaịza dị mkpa ka e nyere gị aka. Isiokwu a ga-ekwu okwu banyere superphosphate ngwa ya na ihe onwunwe ya.
Kedu ihe bụ superphosphate
Mgbe na ihe mere jiri superphosphate
Mmekọrịta na nri ndị ọzọ
Ntuziaka maka iji superphosphate
Esi mee ka okpo nke superphosphate
Ọrụ nke phosphorus na mmepe osisi: otu esi achọpụta ma enweghi site na phosphorus
A gaghị enwe ike ịmalite ọrụ nke phosphate fatịlaịza maka osisi: ekele maka nke a, usoro ihe mgbọrọgwụ na-emepe ma wusie ike, àgwà a na-atọ ụtọ na-arịwanye elu, a na-amụba mkpụrụ osisi ma na-eme ka mmeghachi omume oxidative na anụ ọkụkụ dị ntakịrị. Mgbe a na-enye ya osisi n'ụzọ zuru ezu, ọ na-eji mmiri eme ihe n'ụzọ dị ntakịrị karị, ọnụ ọgụgụ ndị na-aba uru bara uru na-abawanye na anụ ahụ, okpukpu osisi na-aba ụba, okooko na-abawanye ụba ma na-amị mkpụrụ. Site n'inwe ihe zuru oke, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-eme ka ripening dịkwuo elu, a na-emepụta mkpụrụ dị elu. Ekele site na phosphorus, nkwụsị nke osisi na ọrịa, na mgbanwe nke ọnọdụ ihu igwe, nakwa dị ka uto mkpụrụ osisi na-amụba.
Mkpụrụ maka osisi - ọ bụ ihe na-akpali akpali, ọ na-adọta osisi ahụ iji gbanwee site na oge uto ruo okooko, mgbe ọ na-amị mkpụrụ, na-eme ka usoro ndụ niile dị mkpa. Enweghị nke site na-ebelata usoro nke njikọ protein ma na-eme ka ọnụ ala nitrates dị na anụ ahụ. Enweghị ezi ego nke mmewere na-ebuwanye ibu, nnukwu osisi nke osisi ahụ gbanwere agba. Site na enweghi uzo ozo, osisi ahu na-adi ike karia oria na nje oria.
Tụlee ihe phosphate nri. Nke a bụ ihe mejupụtara nke ọma na ụdị ntụ ma ọ bụ granulu, na-enye ihe ndị a kụrụ n'ubi na ihe niile dị mkpa. A na-ekekọta ihe ndị a na-emepụta fatịlaịza dị iche iche: dị mfe, okpukpu abụọ, gbasaa ma gbanye. Na superphosphate nwere phosphorus, nitrogen, potassium, magnesium, calcium na sọlfọ.
Otu n'ime ihe ndị bụ isi na-arụsi ọrụ ike, gụnyere akụkụ niile dị mkpa nke osisi, na usoro ọgwụgwọ nke anụ ahụ, na photosynthesis, na-ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma na-enye mkpụrụ osisi ahụ ọkụ. Na ala, ọbụna na ihe kacha edozi ahụ, ọ dịghị ihe karịrị 1% nke ala, ọbụna oghere ole na ole na nke a, ya mere ọ dị oké mkpa iji mejupụta ụkọ a site n'enyemaka nke superphosphate ịnweta. Ojiji nke superphosphate fatịlaịza na-amanye ikike ma ọ bụrụ na ị chọpụta na osisi hardwood ahụ agbajiri, tụgharịa-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ nchara. Ndị a bụ ihe ịrịba ama nke enweghi phosphorus, ọtụtụ mgbe a na-egosipụta nke a na seedlings.
Ọ dị mkpa! N'oge oge ike, enwere ike inwe mmeghachi omume na ụda na okpomọkụ, ebe usoro mgbọrọgwụ osisi anaghị enwe ike ịṅụ ihe ruru ala sitere na ala. A na-emepụta mkpụrụ osisi site na ya, a na-eweghachikwa usoro mmepe na mmepe.
Superphosphate nwere ọtụtụ ụdị, a na-ejikọta ogige ụfọdụ na magnesium, boron, molybdenum na ihe ndị ọzọ. Ndị kasị eji ha ga-eleru anya.
Ị ma? Igwe bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa nke ndụ nke osisi, anụmanụ, ụmụ mmadụ na Ụwa n'ozuzu ya. Ihe omumu nke mmewere a na ngwakota nke uwa bu 0.09% nke ikuku ya, ihe di n'ime mmiri mmiri bu 0.07 mg kwa liter. E nwere ihe dị iche iche nke mineral, nke dị n'ime anụ ahụ na ụmụ mmadụ, dịka anụ dị iche iche, na mkpụrụ osisi, na mkpụrụ osisi na osisi DNA.
Superphosphate fatịlaịza mfe, ma ọ bụ monophosphate, bụ isi awọ ntụ ntụ nwere ihe ruru 20% nke site na mejupụtara. Uzuzu adighi aru. Otú ọ dị, e jiri ya tụnyere ụdị ndị ka elu. N'ihi ọnụ ala dị ala, ndị ọrụ ugbo na ọrụ ugbo na-arụ ọrụ na-eji ya eme ihe. A na-eji fatịlaịza a eme ihe n 'omimi miri emi na mmiri na mgbụsị akwụkwọ nke 50 g kwa square mita, na-ejikọta ya na potash na nitrogen nri. Mgbe ị na-akụ mkpụrụ osisi na-eme ka ọ bụrụ 500 g nke ọma, na nso nso nke na-eto eto - site na 40 ruo 70 g. Maka akwukwo ihe ubi, onu ogugu bu 20 g kwa square mita.
Ugboro abụọ nke superphosphate dị iche iche site na ọdịnaya nke calcium phosphate dị ukwuu soluble na mmiri. Fatịlaịza a nwere pasent 50%, 6% sọlfọ na 2% nitrogen. Ihe mejupụtara ya bụ granulated, ọ dịghị gypsum na ọdịnaya. Ka anyị tinye aka na ụdị ala niile na omenala niile. A na-etinye fatịlaịza ná mmalite oge opupu ihe ubi ma ọ bụ ụbịa. N'iji ihe a mejupụtara, ị ga-emeziwanye ogo na oke nke ihe ọkụkụ ahụ, belata oge mkpụrụ osisi na tomato. N'ime oru ugbo ulo oru ugbo, a na-eji superphosphate abuo eme ka umuaka di na ọka, na n 'ala ubi - ime ka abuba di elu. A na-etinye fatịlaịza ma na mmiri na mgbụsị akwụkwọ tupu oge eruo, nke mere na tupu e kụọ ma ọ bụ kụrụ, a na-ere ahịhịa na ala. A na-atụ aro osisi ndị na-egbusi ike na ndị na-adịghị ike ka a gụọ ha mmiri na ngwọta mmiri mmiri nke superphosphate abụọ. Tinye usoro a maka ihe niile a kụrụ na ụdị ala ọ bụla.
A na-emepụta phosphate granulated n'ụdị ọrụ, na-agagharị na-adaba adaba maka iji granulu, wetting the powder composition. Ihe onunu ogwu site na granular superphosphate bu ihe ruru 50%, ọdịnaya nke sulfate calcium bu 30%. Osisi okpukpu osisi na-eme nke ọma na-eme ka superphosphate granulated. A na-echekwa nnukwu mmiri superphosphate nke nnukwu granulu, n'ihi na ọ naghị emezigharị, ma ọ bụrụ na e tinye ya n'ọrụ, ọ na-adụpụ ya. Uru ọzọ: a na-edozi ya na ala, nke bara uru karịsịa na ala acidic na ọnụọgụ nke aluminom na ígwè. Na fatịlaịza na-eme ka mmiri fatịlaịza, na-ejikọta na nzu, na-amụba arụmọrụ ya. Ọtụtụ mgbe, a na-eji superphosphate granular mee ihe n'ubi buru ibu.
Isi na gbakwunyere superphosphate ammonia bụ na ọ dịghị gypsum, nke na-adịghị edozi mmiri. Ihe mejupụtara fatịlaịza ammonia, na mgbakwunye na phosphorus (32%), nitrogen (10%) na calcium (14%), nwere 12% nke sọlfọ, ruo 55% nke potassium sulfate. Akuku superphosphate a bara uru maka ihe mmanu na osisi ndi ozo, ha choro oke ogwu. A na-eji fatịlaịza a mee ihe, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, iji normalize ihe nnu salts na alkalis n'ime ala. Ihe kachasị mma nke mejupụtara ya bụ na ọ dịghị oxidize ala, n'ihi na ọ bụ ammonia ka a na-emeghachi omume acid ahụ. Ndị irè nke fatịlaịza a dị pasent 10% karịa ogige ndị ọzọ.
Ọnọdụ kachasị mma maka ntụgharị nke superphosphate n'ime ụdị ndị a na-enweta na osisi bụ ihe nrịbama nke ala 6.2-7.5 pH na okpomọkụ nke dị ala karịa ogo Celsius. Iji hụ na ọnọdụ ndị a na nnweta phosphorus na osisi, a na-eme nsị nke ala. Superphosphate na-ejikọta ha na wayo, osisi ash na dolomite ntụ ọka.
Ntị! Gbanyụọ ala n'ihu: otu ọnwa tupu atụkwasị anya nke superphosphate.
Eme ka phosphorus digestibility mejupụta ya na organic nri: humus, nri na nnụnụ na droppings.
A na-atụ aro nke superphosphate maka osisi dị iche iche ịbanye n'ime ala mgbe egwu ala na ọdịda ma ọ bụ mgbe ịgha mkpụrụ. A na-ejikwa ya dị ka mgbakwasa n'elu mgbe a na-akọ ubi n'ubi, osisi mkpụrụ osisi na osisi.
Na-atụ aro doses maka ubi osisi:
ná mmalite oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, mgbe ha na-egwu ala, ha na-agbakwunye site na 40 ruo 50 g kwa square mita;
mgbe kere seedlings - 3 g ọ bụla onu;
dị ka akwa mgbakwasị ala akọrọ kwa mita mita - 15-20 g;
maka osisi mkpụrụ osisi - site na 40 ruo 60 g kwa mita mita nke gburugburu nke azu.
Mmasị A chọpụtara na Hennig Brand - onye na-emepụta ihe na Hamburg. N'afọ 1669, onye ahịa na-ere ahịa, na-atụ anya imezi ọnọdụ ego ya, gbalịrị inweta nkume onye ọkà ihe ọmụma na enyemaka nke nyocha nke alchemical. Utu ke oro, enye ama okụt n̄kpọ emi okodude ke ekịm.
Ihe na-esi na superphosphate na-ewepụta ya site n'aka ọtụtụ ndị na-eto eto. Nke a bụ nsogbu dị ukwuu ime, n'ihi na gypsum, nke dị n'ụdị fatịlaịza ụfọdụ, achọghị ka ọ gbazee na mmiri na-enweghị sedimenti.
Iji mezuo usoro ahụ nke ọma, akwadoro ịgbaso usoro ndị a:
Were nkwonkwo granular na mmiri ọkụ (100 g kwa liter).
Mee ka o sie ike ruo ogbe iri ato.
Ka ị ghara ịhapụ ihe ncheta nke sedimenti, nsogbu site na nnukwu gauze.
Mgbe itinye ya n'ọrụ, rịba ama na 100 g nke mkpuchi ahụ ga-eji dochie 20 g nke ihe akọrọ; otu mita nke ala nwere ike ịgwọta ya. Ojiji nke superphosphate na-akpali uto nke osisi, na-ewusi akụkụ uhie na usoro mgbọrọgwụ, na-akwalite okooko lush na, n'ihi ya, ọtụtụ mkpụrụ osisi, na-eme ka mgbochi nke osisi gaa na ọrịa. Fụchaa ubi gị na orchard gị, ihe ndị ị na-eto ga-aza ezigbo owuwe ihe ubi.
Esi nweta agwọ si nacha
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ A na-eji superphosphate mee ihe n'ugbo